Slack manova ny kisary ho an'ny fampiharana ho an'ny finday | Famoronana an-tserasera
El fanovana farany nataon'ny ekipa Slack design Nanjary nampiasa ny fotsy fotsy fa tsy ilay maizina izay efa nahazatra antsika.
Raha toa ka efa niteraka onjan-dranomasina Slack tao amin'ny Twitter ianao, miaraka amin'i paositra marobe mitsikera ny famolavolana logo vaovao latsaky ny 2 volana, dia nahavita zavatra mitovy amin'izany izy.
Ny farany fanavaozana ny famolavolana logo Slack dia fanovana izay ho lokoo fiaviana ho an'ny kisary fampiharana finday. Ankehitriny dia niova tamin'io volomparasy mainty io ho fotsy fotsy izy.
Manomboka anio dia mety ho hitanao ny fanovana ny kisary fampiharana Slack anao avy amin'ny volomparasy ho fotsy. Izany dia tokony hanamora ny fahitana azy kely amin'ny fitaovanao. Tsidiho ny Google Play na Apple App Store raha hanavao.
- Slack (@SlackHQ) Febroary 26, 2019
Efa tamin'ny volana janoary io rehefa ny logo noforonina dia nohavaozina be avy amin'ilay ekipa mpamolavola Slack ihany, na dia miaraka amin'i Michael Bierut sy Pentagram aza. Izany dia nahatonga ny tsikera marobe avy amin'ny fiarahamonina izay "nankahala" ny orinasam-baovao iray amin'ny iray amin'ireo fitaovana fifandraisana matihanina lehibe indrindra ankehitriny.
Ny tanjona dia ny fivoaran'ny logo manokana toy ny mitranga amin'ny marika iray mihamatotra rehefa ela. Nitohy tamin'ny loko mitovy ihany io famolavolana io, na dia nisy fiovana aza ny endrika geometrika izay nanintona ny sary famantarana Slack.
ny fitsikerana ny fampiasana ny fotsy amin'ny loko ambadika Miorina amin'ny zava-misy fa sarotra kokoa ankehitriny ny manavaka ny Slack amin'ny fampiharana hafa amin'ny finday. Marina izany, indrindra raha ampitahaintsika amin'ny fampiharana G lehibe hafa toa ny Google Photos ary misy itovizany maro izany.
Una fampiharana finday izay havaozina miaraka amin'ny loko fotsy vaovao ho an'ny famatsiam-bola ary amin'izay dia ho sarotra kokoa ny manavaka azy. Na dia tsy haharitra ela akory aza isika vao zatra hanohy hampiasa azy io toy ny efa natao hatrizay; vitsivitsy no ho mpampiasa izay mamela azy io ho an'ny fanovana hatsarana na saika tsy misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fanovana bebe kokoa amin'ny logo Slack: amin'ity indray mitoraka ity dia fotsy fotsy